На картах Россельхозбанка могут появиться бренды уральского агропрома – молоко, яйца, картофель — Картофельная Система
Imikhiqizo yomkhakha wezolimo wase-Ural ingavela kumakhadi eRosselkhozbank - ubisi, amaqanda, amazambane
IRosselkhozbank ihlela ukuxhasa imikhiqizo yezolimo yesifunda ngokukhipha amakhadi asebhange. UMnyango Wezolimo waseSverdlovsk waba ngowokuqala ukuphendula kulesi sinyathelo.
“Umqondo omuhle lo,” kusho umphathi obambile. Ungqongqoshe wemakethe yezolimo nezimboni zabathengi besifunda saseSverdlovsk iSvetlana Ostrovskaya, - futhi kungakuhle ukubeka uphawu esifundeni saseSverdlovsk kulawa mabalazwe, ngoba sithathwa njengesinye sezifunda ezihamba phambili ekuthuthukiseni ezolimo. Singanikela ngethebula eliphelele lemikhiqizo ewusizo yase-Ural - izinhlobo zezolimo zethu. Isibonelo, ingilazi yobisi, ngoba yaziwa ngochwepheshe ukuthi ubisi lwe-Ural luwusizo kakhulu. Iqanda liwuphawu lokuphila. Isifunda saseSverdlovsk sinikeza ukukhiqizwa kwezinkukhu hhayi kuphela, kepha nezakhamizi zakwezinye izifunda zaseRussia. Amazambane, nawo afanele ukwenyuselwa kuwo wonke amaRussia, uma kungenxa yokuthi amashumi amaningi eminyaka lesi sifunda besilokhu sihola phakathi kwezihloko ze-Ural Federal District, naseRussia yonkana, ekukhiqizweni kwayo. Izinhlobo zamazambane e-Ural zimnandi, ziyakhiqiza futhi ziyamelana nesimo sezulu saseRussia. "
Ake sikukhumbuze ukuthi uhlelo lukaRosselkhozbank lwakhulunywa ngaphakathi kohlaka lomcimbi oyinhloko wezolimo wonyaka - umbukiso "we-Golden Autumn" eMoscow.
“Isiko, okungokwesiko nomlando wendawo ethile, kanye nekhwalithi engaguquguquki - lena yimikhiqizo yangempela yesifunda. Sikholwa ukuthi abakhiqizi bethu bezolimo bazonothisa uhlu lwemikhiqizo edume kakhulu ngeziningi ezintsha ezizojabulisa abantu baseRussia nabathengi bangaphandle. Ukuhlonipha imikhiqizo yesifunda, sizobeka izithombe zabo kumakhadi asebhange, ”kusho u-Irina Zhachkina, uSekela Sihlalo Wokuqala we-Management Board yaseRosselkhozbank JSC.
Source: Imininingwane ingosi yesifunda Sverdlovsk
Tags: RosselkhozbankIsifunda saseSverdlovsk
I-Russia ikhuphule ukuthunyelwa kwamazambane ngokwesithathu
Esifundeni saseTambov, umsebenzi uyaqhubeka wokuvuna imifino
Isifunda saseSverdlovsk: Isomiso sangoJulayi saholela ekwehleni kwenani lokuvunwa kwamazambane
E-Urals, kwaqala ukuvunwa kwamazambane kanye nemifino
Isomiso esifundeni saseSverdlovsk singachitha kuze kube yingxenye yesitshalo samazambane namabele
Isifunda saseSverdlovsk sihlela ukuqoqa ngaphezulu kwamathani ayizinkulungwane ezingama-218 zamazambane ngo-2020
Amazambane esifundeni saseSverdlovsk atshalwe endaweni eyihektare ayizinkulungwane eziyi-13,6
Isikhungo esiyingqayizivele sokufuya sakhiwe e-Ural Science Science Science Institute of Agriculture
Imiphumela yombukiso we-AGROSALON 2020
I-Russia izothuthukisa ukuphatha ukuphathwa kwezibulala-zinambuzane nemithi yezolimo